Igumbi lokulala elineebhedi ezimbini kwindlu yekoloni - Emazantsi edolophu - I-Airbnb
Igumbi lokulala elineebhedi ezimbini kwindlu yekoloni - Emazantsi edolophu
Indlu entle yezinto zakudala, ekhethekileyo kwisitayile sayo sobukoloniyali, kwiiblokho eziyi-4 ukusuka embindini weJuchitán. Iindawo ezikufutshane ezikhuselekileyo nezicocekileyo. Ineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye neebhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-3 kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke zokuphumla. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu egumbini. Indawo yokupaka yangaphakathi equkiweyo. Izinto eziyimfihlo zizonke
Esi sixeko siphantsi kokwakhiwa kwakhona emva kwenyikima kaSeptemba 2017. Indawo ye-Airbnb ikwimeko entle.
Yindlu endala yenkulungwane yamashumi amabini eyayiseyomakhulu wam, ehambisana nokwakhiwa kwale mihla ngendlela efanayo yesintu. Ime kwindawo ekhuselekileyo kwiiblokho eziyi-4 ukusuka embindini wesixeko. Indawo yakho iza kuba kwindawo entsha, etofotofo nekhuselekileyo.
Yindawo ekufutshane kakhulu embindini ngoko ke iyasebenza. Kukho iindawo eziliqela zokutya ezikufutshane ingakumbi ngokuhlwa. Emini ungaya kuzo zonke ezo ndawo.
Abazali bam, uLilia noVicente bahlala endlwini ibe banoxanduva lokufumana iindwendwe zethu. Bayazi kakuhle idolophu, imbali yaso nabantu baso. Ndiza kufumaneka ngefowuni, ngeposi okanye ngomyalezo we-Airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Juchitán de Zaragoza